Britain: Booqashada Madaxweyne Shariif
Madaxweynaha Somalia Sheekh Sharif Sh. Axmed ayaa wali ku guda jira booqasho uu maalintii labaad ku joogo dalka Britain
Madaxweyne Shariif iyo wafdigiisu, waxay shalay kulan la qaateen ra'iisul-wasaaraha Britain Gordon Brown iyo xoghayihiisa arrimaha Dibedda David Miliband.
Sidoo kale, Madaxweyne Shariif, wuxuu khudbad dheer ka jeediyay Machadka daraasaadka caalamiga ah ee Chatham House. Khudbadaasi wuxuu Shariif uga xog-warramay xaalladaha kala duwan ee dalka Somalia, sida dagaallada, argagixisada, burcad-badeedda.
Shariif wuxuu sheegay in dadka Soomalida iyo beesha caalamku ay ka gaabiyeen waxkaqabashada dhibaatada Somalia, iyadoo dhamaan dadaalladii la doonayay in Somalia lagu caawiyo ay ahaayeen kuwo kala dhantaalnaa. Madaxweyne Shariif wuxuu sheegay in xal la'aanta Somalia ay keentay in fikradaha Al-Qaacida ay u soo gudbeen Somalia.
Madaxweyne Shariif, wuxuu khudbadaasi mar kale ku eedeeyeey Eritrea kaalinta ay ku leedahay dagaallada Somalia.
Warbixin dheer oo ka hadlaysa booqashada madaxweyne Shariif ee Britain ka dhagayso qeybta hoose ee qoraalkan.